रोचक – mero sathi tv
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १४:१९ April 30, 2018
LeaveaComment on सहि समयमा खिचिएका उत्कृष्ट १५ तस्बिरहरु हेर्नुहोस्
जतिसुकै राम्रो फोटोग्राफर भएपनि सही समय र सही स्थान नभएसम्म त्यो फोटो त्यति उत्कृष्ट देखिँदैन। इन्स्टाग्राममा प्रति सेकेन्ड ७ सय २९ वटा फोटो पोष्ट हुन्छन् तर थोरै मात्र फोटोमा फेटोग्राफरको निकै तारिफ हुन्छ । जुन फोटोमा धेरै भन्दा धेरैले ‘वाउ’ भनी कमेन्ट गर्छन् हेरौं ब्राइट साइडले .कम्पाइल गरेका यस्ता उत्कृष्ट तस्बिर जुन सही समय र […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार ११:५७ April 30, 2018
LeaveaComment on एउटा सानो सुपारीको दानाले घरमा भित्रिन्छ सम्पति, बनाउँछ धनी आखिर कसरी ?
पूजा गर्ने र खाने सुपारी भिन्ना भिन्नै हुन्छ । खाने सुपारी ठुलो हुन्छ भने पूजा गर्ने सुपारी सानो हुन्छ । सुपारी बडी खाने मानिसहरु प्राय सुपारिलाई पानमा लगाएर खाने गर्दछन। बास्तुशास्त्रले सुपारिको बारेमा धेरै कुराहरु भनेका छन मानिन्छ कि मन्त्रको सहयोगको साथ घरमा सुपारी राखे सकारात्मक ऊर्जा घरभित्र प्रबेश गर्दछ भने खुशी -सम्रिद्धी आउनेछ । […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार ११:२७ April 30, 2018
LeaveaComment on सोनम कपुरको विवाहमा पाहुना बोलाउने अनौठो तरिका
सोनम कपुर र आनन्द आहुजाबीच हुने यतिबेला बलिउड फिल्मी उद्योगको सबैभन्दा ठूलो समाचार हो। लामो समयदेखि आफ्नो विवाहको विषयमा मुख नखोलेकी सोनमको विवाहको विषयमा फरक फरक समाचार सार्वजनिक भएका थिए। बम्बे टाइम्समा प्रकाशित भएको एक समाचारका अनुसार सोनम र आनन्दले आफ्नो विवाहका लागि खास योजना बनाएका छन्। सो योजना अनुसार सोनम र आनन्दले आफ्नो विवाहमा […]
१६ बैशाख २०७५, आईतवार ०७:५१ April 29, 2018
LeaveaComment on फूल फुल्ने ३१२ प्रजातिका वनस्पति नेपालमा मात्र
विभिन्न प्रजातिका फूल फुल्ने वनस्पतिमध्ये ३१२ प्रजाति नेपालमा मात्र पाइने गरेको छ। वनस्पति विभागले दिएको जानकारीअनुसार पाँच हजार ३०९ फूल फुल्ने वनस्पतिमध्ये नेपालमा मात्र ३१२ प्रजाति पाइने गरेको हो । जसमध्ये गुराँस ३१ किसिमका छन्। यसैगरी लेउ एक हजार एक, झ्याउ ढुसी दुई हजार ४६७, लाइकेन्स ७९२, झ्याउ एक हजार २१३, उनीउ ५८०, फूल नफुल्ने छ […]
१६ बैशाख २०७५, आईतवार ०६:२० April 29, 2018
LeaveaComment on फूल फुल्ने ३१२ प्रजातिका वनस्पति नेपालमा मात्र पाइने
विभिन्न प्रजातिका फूल फुल्ने वनस्पतिमध्ये ३१२ प्रजाति नेपालमा मात्र पाइने गरेको छ । वनस्पति विभागले दिएको जानकारीअनुसार पाँच हजार ३०९ फूल फुल्ने वनस्पतिमध्ये नेपालमा मात्र ३१२ प्रजाति पाइने गरेको हो । जसमध्ये गुराँस ३१ किसिमका छन् । यसैगरी लेउ एक हजार एक, झ्याउ ढुसी दुई हजार ४६७, लाइकेन्स ७९२, झ्याउ एक हजार २१३, उनीउ ५८०, […]
२७ चैत्र २०७४, मंगलवार १६:५४ April 10, 2018
LeaveaComment on पेटभित्रको बच्चीको मार्मिक आत्मकथा (यो पढेपछि सबैकाे मन रुन्छ)
आमा म आज सात इन्च लामो भए । तर मेरो सरिरमा सबै अंगहरु छन् । मलाइ तपाइको आवाज एकदमै मनपर्छ, सुनिरहुँ झैं लाग्छ । तपाइको आवाज सुन्दा मामु प्रत्येक चोटि म मेरा सा साना हातखुट्टाहरु हल्लाउने प्रयास गर्छु । तपाइको मुटुको धड्कन मेरो एकान्तको साथि हो । दाेस्रो महिना आमा, आज मैले मुँस्कुराउन सिकें । […]
२७ चैत्र २०७४, मंगलवार १६:०६ April 10, 2018
LeaveaComment on बुद्धको पाईलाको फोटो जसले सेयर गर्छ उसलाई ७ दिन भित्रै निकै ठूलो खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ ! साथ साथै धन लाभको सुरुवात हुनेछ! हजुरहरु सबैलाई शुभदिनको शुभकामना मात्र ॐ लेख्नुहोस!अनी शेयर गर्नुहोस मनोकामना पुरा हुनेछ!
बुद्धको पाईलाको फोटो जसले सेयर गर्छ उसलाई ७ दिन भित्रै निकै ठूलो खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ ! साथ साथै धन लाभको सुरुवात हुनेछ! हजुरहरु सबैलाई शुभदिनको शुभकामना मात्र ॐ लेख्नुहोस!अनी शेयर गर्नुहोस मनोकामना पुरा हुनेछ! बुद्धको पाईलाको फोटो जसले सेयर गर्छ उसलाई ७ दिन भित्रै निकै ठूलो खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ ! साथ साथै धन […]
२७ चैत्र २०७४, मंगलवार १५:२४ April 10, 2018
LeaveaComment on नियमित मन्दिर जानुहोस्, यस्ता घातक रोगबाट बचिनेछ
हामीमध्ये यस्ता धेरै व्यक्ति हुन्छन्, जो दिनको शुरुवात पूजा–पाठबाट गर्छन् । व्यस्त जीवनशैलीका कारण मन्दिर जान नपाए पनि धेरैले आफ्नै घरमा पूजाकोठा तथा सानो मन्दिर बनाएका हुन्छन् । घरमा मन्दिर हुँदा सकरात्मक ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ । जो परिवारका लागि पनि राम्रो मानिन्छ । तर घरमा भन्दा पनि बाहिरको (ठूलो) मन्दिर जाँदा धार्मिक दृष्टिकोणले मात्र हैन, […]
२७ चैत्र २०७४, मंगलवार १५:२२ April 10, 2018
LeaveaComment on विश्वको सबैभन्दा खुसी मुलुक फिनल्यान्ड,भारतभन्दा नेपाल अगाडि
संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास समाधान नेटवर्क (सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सोल्युसन नेटवर्क) ले विश्व खुसी दिवसका अवसरमा गरेको सर्वेक्षणको सूची सार्वजनिक गरेको छ । यस शीर्षकमा पछिल्लो वर्ष पहिलो स्थानमा रहेको नर्वे यसवर्ष भने दोस्रोमा झरेको छ । सर्वेक्षणका अनुसार अहिले विश्वको सबैभन्दा खुसी मुलुक फिनल्यान्ड रहेको छ । जनताको आय, स्वतन्त्रता, विश्वास, सुरक्षा, स्वास्थ्य जीवनको सम्भाव्यता, […]
२७ चैत्र २०७४, मंगलवार १५:१९ April 10, 2018
LeaveaComment on कपडा किन्नुभन्दा पहिले के कुरामा ध्यान दिने ?
० काम गर्नका लागि निश्चित कपडा पहिरिँदा तपाईंलाई उत्प्रेरणा मिल्छ । यदि तपाईं फिटनेस सेन्टर वा एक्सरसाइजका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने वर्कआउटमा लगाउने कपडाभन्दा फरक ड्रेसअप गर्नुस् । र, नियमित त्यही कपडाको प्रयोग गर्नुस् । प्रायः फिटनेसका लागि हल्का र स्पोर्टी खालका कपडा पहिरिनु राम्रो हुन्छ । ० एक अध्ययनले देखाएको छ कि जुन मानिस […]